Firaisan-kina sy fitiavan-tanindrazana no hafatr`izy ireo – Gasy Egypte
Anisan`ny zavatra tena mahafinaritra tokoa ny fahaizan`ny malagasy mifandray sy mifanakatia na dia lavitra ny tanindrazana aza. Izany dia hita taratra tokoa amin`ny fifandraisana amin`ireo malagasy namana izay tonga mitsidika na tonga manao fiofanana eto. Anisan`ireo malagasy izay nitsidika sady tonga nanao fiofanana teto Egypte i Commissaire Lionel, mahafinaritra tokoa ny fiarahana taminy, satria nahatsapa fa tena mananjoky tokoa miaraka aminy; nahatsikaritra be tokoa ny fitiavan`ny egyptiana tanidrazana izy, ary ny faniriany dia ny mba hananantsika malagasy koa izany toetsaina tia tanidrazana izany. “Tokony haneho avo ny maha-malagasy antsika isika“ hoy izy, ary tsy tokony ho mena-mitaha satria tany manankarena sy miavaka koa i Madagasikara.
I Rachelle indray dia tonga nanatona fiofanana momba ny vehivavy mahaleo tena.Ary hita taratra taminy tokoa izany fahaleovantena izany, satria tena mikofoka sy mitady etsy sy eroa ,ka nandritra ny fotoana nandalovany teto Egypte, dia fantany avokoa ny toerana tsara ho fantatra rehetra. Izy rahateo koa moa no nitarika voalohany tamin`ny fivoahan`ny promotion izay nanao fiofanana teto Egypte;
Marihina fa i Rachelle dia Presidente ny association BMMP (Business Mission Mobilization Partnership). Nanamafy tokoa izy ny amin`ny firaisankina sy fifankatiavana. Izay mitambatra ho vato, izay misaraka ho fasika hoy ny Ntaolo, ka amin`izao fotoana izao no tena tokony hitambarantsika mba hampandroso ny Gasikara firenetsika.
10 Thoughts to “Firaisan-kina sy fitiavan-tanindrazana no hafatr`izy ireo”
Lioresal Pharmacie Falange A Propecia where to buy cialis online safely Herbal Pills To Last Longer Best Prices On Cialis 5 Mg
Cephalexin Dermatitis Cuanto Cuesta Cialis Generico 500mg Amoxicillin generic cialis overnight delivery Amoxicillin Dosing In Infants
Priligy Dosierung Canadian Pharmacy Buy Online Ed Pills viagra Nolvadex Cycle Cephalexin For Veternarian Use
Uk Amoxicillin Muscoli Effetti Collaterali Propecia generic 5mg cialis best price Buycialisonlineusa Acular
Trovare Viagra Cialis Profession For Sale Online viagra online prescription Kamagra Pas Chere Forum Lasix Purchase Online Propecia Tu Retrato
Keflex Wiki Cialis Vente En France Prednisolone Order Online Australia
Rite Aid Price Amoxicillin 500 Mg viagra Synthroid No Prescription Usa
Donde Puedo Comprar Cialis Wirkt Nicht Cialis Levitra viagra discount isotretinoin in usa drugs with free shipping Cephalexin Indication
Levitra Sales In Usa Cialis Prezzo Al Pubblico In Farmacia Cytotec Order viagra Propecia Germany Р вЂњРЎвЂњРІР‚в„–Р С–РЎвЂњРЎвЂќР С–РЎвЂњР’В Pharmacys Online
Cod Provera Ralovera Best Website In Internet [url=http://nefoc.com]propecia cigartec[/url] Propecia Toxicidad Propecia O Rogaine Expired Amoxicillin Clavulanic Potassium Tablets